အူးလေး ရွှေတိုက်စိုး ရဲ့ မင်္ဂလာနေ့ အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » အူးလေး ရွှေတိုက်စိုး ရဲ့ မင်္ဂလာနေ့ အမှတ်တရ
အူးလေး ရွှေတိုက်စိုး ရဲ့ မင်္ဂလာနေ့ အမှတ်တရ
Posted by Mလုလင် on Nov 24, 2012 in Members, Photography | 41 comments
စာ .. နောက် မှ ရေးတော့မယ်ဗျာ .. တော်ကြာ ကျုပ်အတွက် မကျန်တော့မှာ စိုးလို့ ဗျို့  ………..။
အသွေးထဲ ………… အသားထဲ က.. နေ ဂုဏ်ယူပါကြောင်း …….
နှစ်ကိုယ်တူ .. ချစ်သမျှ ..
လိမ္မာစမ်းပါသားရယ် ~~~~ လိမ္မာစမ်းပါ ~~~ သား … ရယ်။
အထက်ပါ ဓာတ်ပုံ ရဖို့ အတွက် မိတ်ကပ် ဖန်တီးရှင် … အသာတကြည်ဖြဲ တဲ့ မာမီရဲ ကို ကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း …. သူ့ လက်ချက် နဲ့ သတိုးသား ဆိုတာများ .. နိုပျိုဥတို နေတာ .. ဂစ်ဂစ် …။
Congratulation ပါဗျိုး ……………. (အကျယ်ကြီး အော်သည်။)
လိုက်တယ်နော်…’ နှစ်ကိုယ်တူ ပြုံးသမျှ ‘
ဂုဏ်ယူပါတယ် ဥူးလေးတိုက် ….
ရွှေနဲ့မြလို နေနဲ့လ လိုလိုက်လဲလိုက်ဖက်။
နုပျိုလန်းဆန်းအချစ်ပန်းများပွင့်ပြီး ပျော်ရွှင်ကြည်နူး ဒီမင်္ဂလာဦးမှသည်
နားလည်မှုများနဲ့ ခွင့်လွှတ်သီးခံစိတ်များနဲ့ အကြင်နာတရားများနဲ့ ညှာတာစိတ်များနဲ့
တကူးတက အလျင်အမြန်တင်ပေးသော ကိုအမ်လုလင်အားလည်း ကျေးဇူးအထူးပါ။
တကယ့်ကို နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့
နားလည်မှုကိုယ်ဆီ ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်ဗျာ…။
အူးစည်လည်း အားကျပါ၏ အိမ်ပြန်ရင် ယုသန်ဒါတင်နဲ့
လက်ထပ်မှာမို့ အူးလေးလုလင်မှ လာပီး ဓါတ်ပုံ
ဒီညဘတ်ချလာနိုက်စ်ရှိသေးလားဗျို့…. လာသောက်မလို့.. ဟဲဟဲ
သတို့သားနဲ့သတို့သမီးကပါရောပြီး ၀ရုန်းသုန်းကားသောင်းကျန်းနေကြတာ သူတို့မင်္ဂလာဆောင်နေတယ်ဆိုတာတောင် မေ့နေတဲ့အတိုင်း….
ခန်းမထဲစ၀င်ကတည်းက မျက်မှန်ချွတ်ထားလို့မမှတ်မိသလိုတောင်ဖြစ်ရတဲ့ ရှမ်းမချောကလေးကလဲ စတိုင်တကယ်မိတယ်….
ပါးကလေးခွက်နေအောင်ပြုံးရယ်နေတဲ့ ခိုင်ခိုင်ရဲ့သမီးလေးက ပိုတတ်ပြီးပိုချစ်စရာကောင်းလာတာ…..
မျက်နှာကပြုံးနေပြီး စိတ်ထဲကကြိတ်အားကျနေတဲ့ အမတ်မင်းကလဲ လိုက်ပြီးဧည့်ခံပေးရှာပါတယ်။
မွေးနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ကြားက တက်ရောက်အားပေးတဲ့ မနိုဗွီလိုက်ကျွေးမှာကိုတော့ သွားစရာရှိသေးလို့ငြင်းခဲ့ရတယ်…
ကျုပ်ကို ဟင်းကောင်းကျွေးကောင်းတွေခပ်ထည့်ပေးပြီး သူ့ကျတော့ ရှိတာနဲ့စားသွားတဲ့ ကိုနိုဇိုမိကြီးကိုလဲ အားတောင့်အားနာဖြစ်ရပြန်တယ်…
မတွေ့ရတာကြာတဲ့ ကိုသူရဇော်နဲ့ ကိုရဲစည်ကိုလဲ နှုတ်ဆက်ဖြစ်တယ်…
ကိုကြောင်ဝတုတ်တို့မောင်နှံရောက်ပြီးမကြာခင်မှာတော့ သူစိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့စားနိုင်အောင် အလိုက်တသိ ထ ပြန်ခဲ့ပါတယ်…။
အင်း… တကဲ့ မင်္ဂလာဆောင်……
” ခန်းမထဲစ၀င်ကတည်းက မျက်မှန်ချွတ်ထားလို့မမှတ်မိသလိုတောင်ဖြစ်ရတဲ့ ရှမ်းမချောကလေးကလဲ စတိုင်တကယ်မိတယ်… ” ကျေးဇူးပါချင့် အမှန်က အကြွေးတောင်းသူများလိ့ ရုပ်ဖျက်ထားတာ ဦးဦးပါလေရာရေ …
ဆရာအကို ကိုရွှေထိုက်ခိုးနဲ့ အုပ်ထိန်းသူဘ၀မှ ရာထူးတက်သွားပြီး ရွှေတိုက်ကြီးအား ပိုင်ဆိုင်သွားသူ တီတီစိမ်း တို့ ပျော်စရာနေ့တွေပိုင်ဆိုင်ပြီး
အရပ်ရှည်ရှည် ကလေးလေး မွေးပါဇေလို့ ….ဆုတောင်းပေးကြောင်း
ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သတို့ သား သတို့ သမီး မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ပျော်လာမိတယ်
အဲဒီလင်မယားနှစ်ယောက် ယနေ့ မှ စ နှစ်တစ်ရာတိုင် ပျော်ရွှင်ချစ်ခင်ချမ်းသာစွာနဲ့ ပေါင်းသင်းရပါစေဗျား
သားတစ်ရာ မြေး တစ်ကျိပ်နဲ့ တစ်ရေးမှ မအိပ်၇ပါစေနဲ့ လို့ လူဗြိုကြီး လူဆိုး (ကြော်ငြာ) … လေးနက်စွာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဂျောင်း.. :harr:
ကိုလုင် လက်ရာကတကယ်ကို ဟန်ဆောင်မှုမပါပဲကြည်နူးခြင်းတွေနဲ့မို့တကယ်အသက်ဝင်လှပါတယ်..။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး ပျော်ရွှင်စရာပွဲလေးဟာ တကယ်အမှတ်တရဖြစ်စေမှာပါ..။
လောကဓံတရားကို လက်တွဲရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ် နိုင်ပါစေ..။
ကြွေးဟောင်းတွေ ကောင်းစွာဆပ်လို့ ကြွေးသစ်တွေလည်း လှိုင်လှိုင်ကြီးချပေးနိုင်ပါစေလို့…။
Congratulation ပါ ကိုရွှေတိုက်စိုး၊။ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းသင်းနိုင်၊ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ …။
ကိုတိုက်နဲ့ မမစိမ်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးမှသည် ရွှေရတု စိန်ရတုတိုင်အောင်….. သားသမီးမြေးမြစ်တို့နဲ့အတူ ပျော်ရွင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
မင်္ဂလာ မောင်နှံမှာကွဲ့ ….
နဖူးစာရယ် လာဆုံခဲ့ …
အိုဘယ့် … မင်္ဂလာမောင်နှံမှာကွယ် …
ပေါင်းရစေရန် ရွယ် …
တောင်းဆုတွေလည်း ခြွေလိုက်တယ် …………။
ဒီကဗျာလေးနဲ့ ကိုရွှေတိုက်နဲ့ အမစိမ်းတို့ရဲ့
မင်္ဂလာအတွက် တောင်းဆု ခြွေလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ….။
ဒါ့ပုံဆြာ Mလုလင်ရဲ့ လက်ရာကလည်း မိုက်ဒလယ်ဂျာ …
ပုံက ရှယ်ဘဲ …
ဒီပုံလေးကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး ဧည့်ခန်းမှာ ထားလိုက်ရင်ဖြင့် …
မြင်သူတကာ (အဓိက လူပိုဂျီးဒွေ၊ အပိုဂျီးဒွေပေါ့ .. ) မင်ဂါဆောင်ချင်သွားလိမ့်မယ် ထင်ဘာရဲ့ ခညာ ….
အချစ်မ၀ဘဲ… တစ်နှစ်တစ်သားကျပါစေကြောင်း…. ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား…
လက်ရာကိုကြိုက်လွန်းလို့… လာမယ့်မေလမှာများ အားသလားလို့ပါ။
အိမ် “ထောင်” ကျသွားလေပြီဘဲ
တကယ့် ကို ကြည်နူး စရာကောင်း တဲ့ ဓါတ် ပုံ လေး ပါ။ သတို့ သမီး ၊ သတို့ သား ရဲ့ ကြည် နူး မှု အပြုံး ၊ အပျော် လေးတွေ က ကြည့် မိ တဲ့ သူ ရင် ထဲ ကို ကူး စက် စီး ၀င် စေ ပါတယ်။
မင်္ဂလာ ဓါတ် ပုံ တိုင်း အဲ လို မဖြစ် ပါဘူး။ ဓါတ် ပုံ ဆရာ ရဲ့ သဘာ နဲ့ စေတနာ က စကား ပြော တယ် ထင် ပါ ရဲ့။
ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး အပျော်တွေကူးစက်သွားပါကြောင်း ..
မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာ.. ၂ဖက်ဆွေမျိုး..မိတ်ဆွေ.. အသိုင်းအ၀ိုင်းပါ… ပူးပေါင်းပါဝင်ချိပ်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်..
အောင်ကြစေ..ပျော်ကြစေ.. မော်ကြပါစေသတည်း … :528:
ပျော်ရွှင် နေတဲ့ လှချက် ကို မှင်သက် နေမိတယ် ဗျာ။
မင်္ဂလာ ဆုတောင်း ကတော့ အပေါ်က လူတွေ ပြောတဲ့ အတိုင်း ပဲ လို့။
ပုံထဲ က ပျော်ရွှင် ကြည်နူး မှု မျိုး ကို ထာဝရ ပိုင်ဆိုင် နိုင် ပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပေးတယ် နော်။
ဓါတ်ပုံက အသက်ဝင်တော့ မြင်ရတဲ့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အေးချမ်းသွားတယ်။ရွှေတိုက်စိုးရေ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှနဲ့ အပြစ်တွေကိုလဲ နားလည်မှူနဲ့ ချေဖျက်ရင်း အဖိုးချစ် အဖွားချစ်ထိ သက်ဆုံးတိုင် တည်စေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။
ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်ပါ့။ လိုက်ပြီးဖက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော့်…။ ဘယ်လောက်အထိချစ်သလဲဆိုတော့ အ၀တ်အစားကအစ အရောင်တူ….။
ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ပြောချင်တာက လိုက်ဖက်တဲ့အတွဲတွေကို နေနဲ့လလို့ တင်စားကြတာတော်တော်များများတွေ့ဘူး ပါတယ်။ နေလိုထွန်းတောက်အောင်မြင်မှုနဲ့ လလိုအေးချမ်းမှု ၇၇ှိပါစေလို့တင်စားကြတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်။ ကျနော့်အယူကတော့ နေဆိုတာ ထွန်းလင်းတောက်ပတာမှန်ပေမဲ့နေ့ဘက်မှာ ပဲထွန်းလင်းတောက်တာပါ။ လဆိုတာ ညဘက်မှပဲအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တာပါ။ နေနဲ့လဆိုတာ ဆုံဆည်းနိုင်ခွင့်မကြုံတဲ့အတွက် စုံတွဲတွေကို နေနဲ့လ လို့တင်စားတာ လွဲများနေသာလားလို့ပါ။
သဘောကောင်းတဲ့ ရွှေတိုက်စိုး တို့ဇနီးမောင်နှံ နေလိုထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုးနဲ့ လ လို အေးချမ်းတဲ့ ဘ၀ခ၇ီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင် တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်တစ်ကမ္ဘာတည်ထောင်ထားတဲ့အိမ်ထောင်မှုကမ္ဘာကို တယောက်ကနေမင်းလို နောက်တယောက်ကလမင်းလို တလှည့်စီအလင်းပေးရင်း
အိမ်ထောင်မှုကမ္ဘာသာယာအောင် ဆောင်ရွက်ကြခြင်းလို့.. :harr:
သူတို့သား သတို့သမီးနှစ်ဦးလုံးရဲ့ ကြည်နူးမှု အပျော်တွေကို အပြည့်အဝ ဖမ်းဆုပ်ပြလိုက်သလိုပါလား လုလင်ရေ ..
မောင်မယ်နှစ်ဦး မင်္ဂလာဦးမှသည် ရွှေရတု စိန်ရတုတိုင်အောင်….. သားသမီးမြေးမြစ်တို့နဲ့အတူ ပျော်ရွင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
ှCongratulations and Best Wishes to Ma2 Sein and Ko Shwe Tike Soe.
ကိုတိုက်က မယူခင် သူကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်အမြဲလိုလိုဆိုသဗျ…..
ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားခဲ့တယ် စွန်ငယ်စက္ကူ စိမ်းစိမ်းရယ် လေထဲမှာကြိုးပြတ်ပီးပြတ်သွားမှာ ကြောက်လွန်းတော့ ကျွန်တော်ဟာ ၀မ်းနည်းခဲ့ရတယ် အရွယ်ရောက်တော့ချစ်စိတ်ဝင်…..ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပြေးပီးမြင်…..စိမ်းရယ်ချစ်တယ်…..ချစ်တယ်စိမ်းရယ်……နာမည်လေးကစိမ်းတဲ့ကွယ်…….(သီချင်းစာသားလေးတွေနည်းနည်းမှားနေမလားပဲ)
Congratualation Shwe Tite Soe and Ma Ma Seinn
ပျော်နေကြတယ်.. ပုံက အသက်ပါလိုက်တာ..
မိတိုက်က မမအုပ်ကို ဓါတ်ပုံထဲ့မှာ စကားတွေပြောနေတယ်နော်
ဟင်းးးးးးးးးးးးးးး ငါကိုက်စားလိုက်ရတဲ့ :harr:
ငွေရတု ရွှေရတု စိန်ရတု တွေစီရီကာ
လပြည့်ဝန်းရွှန်းလဲ့တာ ‘စိမ်း’ မျက်နှာလေးပါ… နေရောင်ခြည်လိုဝင်းဝါ ‘တိုက’်မျက်နှာပါ… အရမ်းကိုလိုက်ဘက်ညီတဲ့ စုံတွဲလေးပါရှင်.. ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် သားတစ်ရာ မြေးတစ်ကျိတ် မြစ်အစိတ် ရသည်ထိ… ပျော်မဆုံးမော်မဆုံး ဘောလုံးကစားနိုင်ဂျပါဇေ… အဲလေ ဘာဆိုင်လို့လဲ ဘောလုံးနဲ့.. အို ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ပြောပြီးဘီ :harr:
နတ်ဖက် တဲ့ စုံတွဲလေးပါဘဲ…
ကျမ်းမာ. ချမ်းသာ. သုခနှစ်ဖြာနဲ့..
သားတစ်ရာ.မြေးတစ်ဖြာ ရသည်ထိ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေသတည်းတဲ့… :hee:
လှလိုက်တဲ့ပုံလေး ……. အဲဒီပုံလေးကို အကြီးချဲ့ချိတ်ထားပါလား ….. ကာလာအနေအထားရော … သတို့သား သတို့သမီးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့မျက်နှာလေးတွေက အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတယ် … အထူးချစ်စရာ ကောင်းတာ အုပ်အုပ်ပါ … ဂျပုမကတော့ သိပ်ချစ်စရာမကောင်းဘူး ……..
ရွာသူားတွေထဲမှာ အစပထမဦးဆုံး ရင်းနှီးခင်မင်ခွင့်ရတဲ့ ရွာ့ယောင်းမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ :hee:
ဟိတ်ဟန်မပါ၊ စတိုင်မထုတ်ပဲ လာသမျှ မိတ်ဆွေတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ခင်ခင်မင်မင် ဧည့်ခံနေတဲ့ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးက ဧည့်ဝတ်မကျေပွန်မှာစိုးလို့ ဧည့်ခမ်းမဆောင်ရှေ့မှာ ကိုယ်ပွားချထားပြီး ဧည့်ခံတာ ဒီမင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ ထူးခြားချက်ပဲ။
ရေပက်မ၀င်ဘူးဆိုတာ ဂေဇက်ရွာသူားတွေ တွေ့ကြတဲ့ပွဲကို ပြောတာဖြစ်မယ်။ :hee:
မင်္ဂလာမောင်မယ်တွေ ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ :hee:
နောက် ထပ် … နောက်ထပ် … update လုပ် ပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ပုံလေးက တစ်ကယ်ကို ပျော်ရွှင်နေကြမှန်း ပေါ်လွင်နေတယ်…
အမိရ ရိုက်နိုင်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာကလည်းတော်လိုက်တာ…